Origami အိမ်သာသုံးစက္ကူအလိပ်ကိုအလှဆင်ရန် | လက်မှုပညာ On
အိမ်သာသုံးစက္ကူလိပ်ကို အလှဆင်ရန် Origami
အားလုံးမင်္ဂလာပါ! ယနေ့ခေတ်လက်ရာမှာ ကွဲပြားတာကို တွေ့ရမှာပါ။ origami ပုံသဏ္ဍာန်များကို အိမ်သာသုံးစက္ကူပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း. ဧည့်သည်များထံသွားသည့်အခါ သို့မဟုတ် ရက်အတော်ကြာ ငှားရမ်းထားသော တိုက်ခန်းရှိလျှင်ပင် ဤစိတ်ကူးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ရေချိုးခန်းကို အထူးထိမိစေရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဒီ origami ပုံစံတွေက ဘာတွေလဲ သိချင်ပါသလား။
ဤ origami များကိုပြုလုပ်ခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းသည်၊ အထူးသဖြင့်ပင်လယ်-အပြင်အဆင်၊ ဂျီဩမေတြီပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သို့သော်၊ အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အဆိုပြုထားသည့်အရာများကို စမ်းကြည့်ပြီးပါက အခြားနည်းလမ်းများကို သင်ကြိုးစားနိုင်ပါသည်။
1 Origami အိမ်သာသုံးစက္ကူလိပ် 1: လှေ
2 Origami အိမ်သာသုံးစက္ကူလိပ် 2: နှလုံး
3 Origami အိမ်သာသုံးစက္ကူလိပ် 3: တြိဂံ
4 အိမ်သာသုံးစက္ကူလိပ်4အဆုံးအတွက် Origami: အခွံကိုချပါ။
5 အိမ်သာသုံးစက္ကူလိပ်၏အဆုံးအတွက် Origami 5- အပေါ်မျက်နှာမူထားသော အခွံ
Origami အိမ်သာသုံးစက္ကူလိပ် 1: လှေ
အောက်ဖော်ပြပါ link တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောပြသောအဆင့်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်ဤ origami ကိုရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြင့်ပြုလုပ်နည်းကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်- အိမ်သာစက္ကူလိပ်များအတွက် Origami
Origami အိမ်သာသုံးစက္ကူလိပ် 2: နှလုံး
Origami အိမ်သာသုံးစက္ကူလိပ် 3: တြိဂံ
အိမ်သာသုံးစက္ကူလိပ်4အဆုံးအတွက် Origami: အခွံကိုချပါ။
အောက်ဖော်ပြပါ link တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောပြသောအဆင့်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်ဤ origami ကိုရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြင့်ပြုလုပ်နည်းကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်- အိမ်သာစက္ကူလိပ်အတွက် Origami 2
အိမ်သာသုံးစက္ကူလိပ်၏အဆုံးအတွက် Origami 5- အပေါ်မျက်နှာမူထားသော အခွံ
မင်းရဲ့ရေချိုးခန်းကိုအလှဆင်ဖို့ ဒီ origami တစ်ချို့ကို အားပေးပြီးလုပ်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်မှုပညာ » လက်မှုပညာ » အိမ်တွင်းလက်မှုပညာ » အိမ်သာသုံးစက္ကူလိပ်ကို အလှဆင်ရန် Origami
ငှက်များအတွက် အစာကျွေးခြင်းနှင့် အိမ်များအတွက် စိတ်ကူးများ